यी हुन् कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने ५ संकेत ! – NepalajaMedia
यी हुन् कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने ५ संकेत !
January 24, 2021 2117
काठमाडौँ । कलेजो शरीरको छालाभन्दा दोस्रो ठूलो अंग हो । अन्य अंगहरु जस्तै कलेजो पनि शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसको सम्बन्ध पाचन प्रक्रियासँग हुन्छ । कलेजोले काम गर्न छोड्यो भने मानिसको निधन हुन्छ ।
स्वस्थ मानिसको कलेजोको तौल १.३ देखि १.६ किलोग्राम हुन्छ । रातो र खैरौ रङमा हुने मानव शरीरको यो अंगले शरीरमा भएको विष वा विभिन्न रसायनलाई फिल्टर गरी पित्त उत्पादन गर्छ र दिसा र पिसाबको रुपमा बाहिर फाल्छ । यसैगरी कलेजोले ३०० वटा भन्दा बढी काम गर्छ । यसले रगतमा चिनीको मात्रा पनि सन्तुलनमा राख्छ । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य रगत निर्माण गर्नु पनि हो ।
Prevहेर्नुहोस् समुद्री किनारमा देखिएकी निया शर्माको १० भाइरल तस्वीर (फोटो फिचर)
Nextमिन्स (महिनावा,री) भएको बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्न हुन्छकि हुदैन ?